ရိုး ရိုး ဘ လော့ဂ် : China Town လူသတ်မှု
Knife gang stabbings in Manchester's Chinatown
Page last updated at 14:32 GMT, Wednesday, 16 June 2010 15:32 UK from BBC news
People in Chinatown have been left shocked, police said.
The centre of Manchester's Chinatown has been sealed off after knife-wielding gangs clashed on its streets, stabbing six men. Up to 20 men from the city's Chinese community were involved in fights, police said.The injured have been treated in hospital following the attacks on George Street at 0220 BST.A 32-year-old man is inacritical condition, two others have serious injuries and three have lesser wounds.George Street has been cordoned off, and is likely to remain closed for several hours, police said.Patrols have been stepped up in the area andamobile police station has been set up.Officers who can speak Mandarin and Cantonese are also on hand, police said.Ch Supt Caroline Ball, of Greater Manchester Police, said: "The community of Chinatown has been left understandably shocked by this incident."The police are highly visible in the area to address peoples' concerns." She appealed to anyone with any information to contact police.
chinatown ဆိုရင် အာရှ သားတွေ အသွားများတဲ့ နေရာလေ။ ဒီနေ့ အရေးအကြောင်း ရှိလို့ မန်ချက်စတာကို တက်အသွားမှာ ပြီး အပြန်မှာ တရုတ်တန်းမှာ မုန့် ဝင်အဝယ် အခင်းဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားပါတယ်။ ကျမဝယ်နေကျ ဆိုင်ကို တားမြစ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့် အဲဒီနားမှာရစ်သီရစ်သီလုပ်ပြီးစပ်စုမိတယ်။ မျက်နှာဖြူတစ်ယောက်ကပြောတယ်။ တရုတ် ဂိုဏ်းက ဓါးနဲ့ထိုးသွားတာတဲ့ လူ၆ယောက်တောင်ထိသွားတယ်ဆိုဘဲ။ you can't mess around with (တရုတ်တွေ) တဲ့ ။ အင်း - တရုတ်တန်းအလည်ဂေါင်တည့်တည့် မှာဖြစ်တာဆိုတော့လဲ ကြောက်စရာပေါ့။ မျက်နှာဖြူစကား မပြောတဲ့ ၊ စိတ်လဲမဝင်စားတဲ့ လူစုစုလေးတွေ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလေ။ သူတို့တွေရဲ့ဝက်သားခုတ် ဓါးမကြီးတွေကတော့ အသည်းယားစရာကြီး။
Posted by ရိုးရိုး at Wednesday, June 16, 2010
ဖိုးတက် 17 June 2010 at 05:28
တရုတ်တော့ ကြောက်တယ်ဝေ့။ တရုတ်တွေက မလွယ်၊ ငယ်ငယ်တုန်းက တော့ တရုတ်ကား ဆို ကြိုက်မှ ကြိုက်။ ဟောင်ကောင် ဂျက်မတို့၊ ဂျက်ကီချန်းတို့လေ။ ခုတော့ သိပ်မကြိုက်တော့ ဘူး ဝေ့။
Anonymous 17 June 2010 at 23:22